चितवनमा सबैभन्दा बढी स्वाइन फलूको संक्रमण भएका बिरामी भेटिए - Nepal Local News
चितवनमा सबैभन्दा बढी स्वाइन फलूको संक्रमण भएका बिरामी भेटिए
August 10, 2017 | , स्वास्थ्य
२६ साउन, चितवन । जिल्लामा स्वाइन फलूको संक्रमण हृवात्तै बढेको छ । स्क्रब टाइफसको संक्रमण तीव्र रुपमा बढिरहेका बेला स्वाइन फ्लू पनि तीव रुपमा बढढेपछि स्थानीय चितवनवासी त्रसित भएका छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार १८६ जनामा गरिएको परीक्षणमा १४१ जनामा स्वाइन फलूको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ ।
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको गत जून, जुलाई र अगस्ट ४ सम्मको परीक्षणका क्रममा चितवनमा सबैभन्दा बढी स्वाइन फलूको संक्रमण भएका बिरामी भेटिएका हुन् ।
जून महिनामा ३५ जनामा गरिएको परीक्षणमा १२ जना, जुलाई महिनामा ११८ मा गरिएको परीक्षणमा ९९ जनामा र अगस्टको ४ गतेसम्म ३३ जनामा गरिएको परीक्षणमा ३० जनामा स्वाइन फ्लूको संक्रमण भेटिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले जानकारी दिए ।
भरतपुर अस्पतालमा आएका बिरामीहरुको रगत नमूनालाई काठमाडौं लगेर परीक्षण गरिएको हो । भरतपुर अस्पतालमै चितवन बाहेकका जिल्ला तनहुँ, लम्जुङ, गोरखा, नवलपरासी, धादिङबाट आएका ३६ जना बिरामीमा गरिएको परीक्षणमा थप ३१ जनामा स्वाइन फलू भेटिएको केसीले जानकारी दिए ।
भरतपुर अस्पतालमा र्‍यापिड टेष्ट गरेपनि पीसीआर परीक्षणका लागि भने काठमाडौं नै पठाउनपर्ने बाध्यता छ ।
स्वाइन फलूको परीक्षण अस्पतालमा निःशूल्क रुपमा हुँदै आएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख विजय झाले यो रोग सुँगुरबाट मानिसमा सरेको नभई मानिसबाट मानिसमा सरेको हुनाले मौसमी रुघाखोकी भन्नुपर्ने बताए ।
सन् २००९ मा विश्वभर फैलिएको स्वाइन फलूको भाइरस अहिलेपनि कायम रहेको र मौसम अनुकुल हुँदा देखा पर्ने झाले बताए ।
सामान्य अवस्थाभन्दा बढी नै ज्वरो आउने वा तीनदिनसम्म पनि ज्वरो नघटने र रुघाखोकी समेत लागेमा स्वाइन फलूको संक्रमण भएको हुन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसलाई मौसमी रुघाखोकी (र्इन्फ्लुएनञ्जा) अर्थात स्वाइनफ्लू पनि भनिन्छ । यो र्इन्फ्लुएनञ्जा ‘ए’ एचवानएनवान भाईरसलाई ‘स्वाइन् फ्लू’ पनि भनिन्छ । पहिले सुंगुरबाट सर्ने भएको यसलाई ‘स्वाइन् ˆलू’ भनिएपनि हाल आएर मान्छेबाट मान्छेलाई नै सर्ने गर्दछ ।
र्इन्फ्लुएनञ्जा ‘ए’.’बी’ र ‘सी’ गरेर तीन प्रकारका हुन्छन् । जसमध्ये ‘ए’मा पर्ने एचवानए संक्रमण भए संक्रमित व्यक्तिको ज्यानै पनि जानसक्छ ।
मौसमी रुघाखोकी वालवालिका, बृद्धबृद्धा र गर्भवती महिलालाई बढी प्रभावित हुने गरेको भरतपुर अस्पतालका चिकित्सक डा.भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
बिरामीले प्रयोग गरेको रुमाल, तौलिया, मोवाइल, चश्मा, कम्प्युटर, ल्यापटप प्रयोग गर्दा, विरामीसँग हात मिलाउँदा, जुठो खाँदा यो रोग सर्न सक्छ । विरामीले हाँछ्यू गर्दा, विरामीको एक मिटरसम्म नजिक बसेको व्यक्तिलाई हावाको माध्यमबाट सर्दछ ।
यसबाट बच्न खोक्दा, हाँछ्यू गर्दा सफा कपडा वा रुमालले नाक, मुख छोप्ने गर्नुपर्छ । साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने, पोषिलो र झोलिलो पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्ने डा. अधिकारी बताउछन् । विरामी व्यक्ति अनावश्यक रुपमा मानिसहरुको भीडभाड भएको ठाउँमा जानु हुदैन् ।
जिल्ला डेंगु सामान्य, स्क्रब टाइफसको जोखिम उत्तिकै
चितवनमा यस वर्ष भने डेंगुको संक्रमण भएका बिरामी खासै नभेटिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले बताए ।
डेंगुको किट केही दिन अभाव भएको भएपनि बुधबार मात्रै ४ सय किट आएको छ । भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलका अनुसार अस्पतालमा अभाव भएको डेंगुको किट र रेविजको भ्याक्सिन उपलब्ध भएको जानकारी दिए ।
जिल्लामा स्क्रव टाइफसका भने विरामी बढ्दै गएका छन् । साउनमहिना यता मात्रै गरिएको परिक्षणमा ८० जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण भएका विरामी भेटिएका छन् । २९८ जनामा स्क्रब परीक्षण गरिएको थियो ।
एलाइजा किट आयो र्‍यापिड टेष्ट किट आएन ?
स्क्रब टाइफस परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पतालमा किटको अभाव भएको २ साता भयो । बुधबार मात्रै स्क्रवको एलाइजा टेष्ट किट आएको भएपनि र्‍यापिड टेष्ट किट भने आएन ।
जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो भरतपुर अस्पतालमा एलाइजा टेष्ट हुदैन् । र्‍यापिड टेष्ट मात्रै हुन्छ । चितवन मेडिकल कलेज र नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा किट दिएर निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने तयारी भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले बताए ।
भरतपुर अस्पतालमा किट नहुँदा विरामीहरुको परिक्षणमा समस्या आएको सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताए । ‘अस्पतालको मेडिसिन विभागमा मात्रै सबै खालका विरामी औसत दैनिक ३०० आँउछन्’ पौडेलले भने, ‘डेंगु, स्क्रवको टेष्ट किट नै नभएपछि बाहिरका नीजि अस्पतालमा पठाउने गरेका छौं ।’